Fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina - Wikipedia
Fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina
(tonga teto avy amin'ny Fanomezan'ny Fanahy Masina)
Ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina na fanomezan'ny Fanahy Masina dia fanomezana hery mahagaga avy amin'ny Fanahy Masina. Izany dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ilain'ny Kristiana tsirairay sady nilain'ireo Apostoly koa tamin'ny andron'izy ireo mba hahafahana manatanteraka ny iraka ampanaovina ny Fiangonana. Raha amin'ny heviny mifintina, ny hoe "fanomezam-pahasoavana" dia voambolana teolojika ampiasaina hanondroana ny fahasoavana omena manokana ho an'ny Kristiana isam-batan'olona mba hahasoa ny hafa, ka tsy afangaro amin'ny fahasoavana izay manamasina ny Kristiana tsirairay, sahala amin'ireo Fanomezam-pahasoavana fito avy amin'ny Fanahy Masina sy ny Vokatry ny Fanahy Masina.
Ireo fanomezan'ny Fanahy Masina tsy mahazatra, izay atao hoe koa "Fanomezana karismatika" dia ireto: ny tenin'ny fahendrena, ny tenin'ny fahalalana, ny fitomboan'ny finoana, ny fanomezana hanasitrana, ny fanomezana hanao fahagagana, ny faminaniana, ny fanavahana ny fanahy samihafa, ny fitenenana amin'ny fiteny maro, ny fandikan-teny. Manampy azy ireo ny maha apostoly, ny maha mpaminany, ny maha mpampianatra, ny fanampiana ny mahatra sy ny marary ary ny fahaiza-mitondra sy mitantana (ity dia miaraka amin'ny raharaha sasany tanterahina ao am-piangonana).
Ireo fanomezana ireo dia avy amin'ny Fanahy Masina ka atolony ny isam-batan'olona, nefa ny tanjony dia ny hampahatanjaka ny Fiangonana manontolo. Resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao ireo fanomezana ireo, ka hita izany ao amin'ny Epistily voalohany ho an'ny Korintiana (1Kor. 12. 8-10; 12.28), ao amin'ny Epistily ho an'ny Romana (Rom. 12. 6-8) ary ao amin'ny Epistily ho an'ny Efesiana (Efes. 4. 11). Miresaka momba ny fanomezan'ny Fanahy koa ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera (1Pet. 4).
Ireo fanomezana ireo dia mifandray amin'ny fahaizana voajanahary sy ny fahaizana mahagaga avy amin'ny Fanahy Masina.
Misy roa lehibe ny fiheverana ny amin'ny fanomezan'ny Fanahy Masina: ao ireo milaza fa efa tapitra ka tsy misy intsony izany (anglisy: cessationism) ary ao koa ireo manambara fa mbola mitohy ny fisian'izany (anglisy: continuationism).
Maro ny fikambanana sy ny fihetsiketsehana nandray anjara tamin'ny fanomezan-danja ny fanomezan'ny Fanahy Masina ka ny andiany voalohany dia ny pentekotisma tamin'ny taona 1906, ny andiany faharoa dia ny fihetsiketsehana karismatika tamin'ny taona 1960 ary ny andiany fahatelo dia ny fihetsiketsehana karismatika vaovao tamin'ny taona 1980.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanomezam-pahasoavan%27ny_Fanahy_Masina&oldid=980718"
Dernière modification le 5 Martsa 2020, à 18:10
Voaova farany tamin'ny 5 Martsa 2020 amin'ny 18:10 ity pejy ity.